Darjeeling News, Kalimpong News, Kurseong News, Darjeeling Hills, Gorkhaland News by Darjeeling Times – सिलाएको मुखले पहाडी विधायकहरूले जनताको निम्ति के माग्ने हुन् ?
Writes: Manoj Bogati
विमल विजय एउटा कुरूप यथार्थ हो । विधानसभा चुनाउ विमल गुरूङको निम्ति हर्कबहादुर छेत्रीलाई हराउनको निम्ति मात्र थियो । यसपटक पनि विमल गुरूङले ‘गोर्खाल्याण्ड’-लाई भोट थाप्ने भाँडा बनाए । यसअघि जीटीए थाप्ने मन्त्र बनाएका थिए । अर्थात ‘गोर्खाल्याण्ड’ विमल गुरूङको दुहुना गाई हो । गरिखाने मेलो । कमाउने मेलो । हो होइन सबुत त छैन, तर बजारमा हल्ला छ, त्यही पैसाले विमल गुरूङले जमिन किन्ने, विदेशतिर होटलहरू बनाउने, आशा कम्प्लेक्सहरू बनाउने काम गरिरहेका छन् रे । हल्ला के छ भने ठेकेदारहरूलाई काम दिलाएर विमल गुरूङले पर्सन्टेज कुम्ल्याउँछन् रे । जीटीए प्रमुख भएकै भरमा विमल गुरूङकोमा त्यत्रो पैसा कहाँबाट आयो ?
विपक्षले ठोकुवा पनि गर्छ, जीटीए विमल गुरूङको जिन हो । निता, विमला, बिक्कीहरूको निधारमा पसेको गोलीको साटो केन्द्र र राज्य मिलेर दिएको उपहार हो जीटीए । हर्कलाई हराउनको निम्ति विधानसभा चुनाउमा भोट किन्ने पैसा विमल गुरूङले त्यही जीटीएबाट कमाएका हुन् । जनमुद्दालाई पार्टी र सत्ता बचाउको निम्ति दुरुपयोग गर्ने विमल गुरूङलाई सचेतहरूले मन पराउँदैनन् । किनभने आफ्नो सत्ता र वर्चस्वको निम्ति उनले हरेकपल्ट ‘गोर्खाल्याण्ड’-को मुद्दासित खेलवाड गरेका छन् । जनताको विमल मोह भङ्ग भइसकेको छ । कालेबुङ समष्टिमा मोर्चाले पाएको मतले यो पनि स्पष्ट पारेको छ । विधानसभा चुनाउले मोर्चाको लोकप्रियताको ग्राफ सार्वजनिक गऱ्यो । वास्तविकरूपमा विमल गुरूङ हारेका हुन् । कालेबुङमा जापले जितेको हो । थोरै मार्जिनले मात्र मोर्चाले जित्नु, मोर्चा आफ्नो पकड खुस्किँदै गइरहेको स्वीटरको धागो साबित हुनु हो । जापले त्यो धागो निरन्तर तानिरहेको छ, विधानसभामा धेरै तान्यो, अब ११ हजार मतको सेरोफेरोमा तान्ने रणनीति जापले नगरपालिका र पञ्चायत चुनाउमा बुनेमा मोर्चा सकिन्छ । कालेबुङबाट त्यो धागो तानिँदैछ, त्यसलाई रोक्न मोर्चाले कस्तो चरित्रको विकास गर्ला त ?
मोर्चाको जितबाट जनताले केही पाउँदैन । हर्कहरूको पालोमा सरकारी बेञ्चमा राखिएका मोर्चा विधायकहरू यसपल्ट २११ जना विधायक विपक्षमा बस्नुपर्ने छ । पहाडमै बोल्न नसक्ने मोर्चा विधायकहरू विधानसभामा बोल्न सक्ने कुरै आएन । यसपटक ‘यसम्यान’-विधायकहरू पाएका छन् विमल गुरूङले । यसपटक त्रिलोक र हर्कमार्का विधायकहरू छैनन् । जब विधायकहरू नै ‘यसम्यान’ छन्, जनताले उनीहरूबाट के पाउने ? डा. हर्कबहादुर छेत्रीले जति गरेका छन्, त्यो सरिता राईबाट सम्भव नै छैन । डा. हर्कले कालेबुङमा पाएको मत, उनले कामको रिजल्ट हो । सरिता राईले पाएको मतको रिजल्ट के हुन्छ ? त्यो अहिले नै स्पष्ट छ । रसिता राई विमलको मोहोरा हुन् जनताका विधायक होइन ।
विमल विजयको उत्सव मनाउनेहरूले सोच्नुपर्ने कुरा के हो भने राज्यमा फेरि पनि तृणमूल कङ्ग्रेसको सरकार छ । यो सरकारले बारम्बार जीटीएमाथि जुन हस्तक्षेप गरिरहेको छ, त्यस विरुद्ध बोल्न सक्ने क्षमता मोर्चासित छैन । मोर्चा न त राज्य सरकारको विरुद्धमा सुप्रिम कोर्ट जान सक्छ, न त जीटीएलाई स्वस्थ्य बनाउनसक्छ । मोर्चा बोल्यो कि राज्यले मदन हत्याकाण्डको फाइल खोल्न सक्छ । आन्दोलनकालका मुद्दा खेपिरहेका दुई चार सभासद्लाई मात्र ‘कारबाही’ गरे, विमल गुरूङ तइनमा आइहाल्छन् । न त विमल गुरूङले गोर्खाल्याण्डको आन्दोलन गर्न सक्छन् न त जीटीएको आन्दोलन गर्न सक्छन् । छुट्टै राज्यको होइन मोर्चालाई अहिले नै नगरपालिका र जीटीए चुनाउको सुर्ता छ । यो दुईटाबाट खुस्किए मोर्चा साम्राज्य नष्ट हुन समय लाग्दैन । तृणमूल कंग्रेसले विस्तारै विस्तारै आफ्नो वर्चस्व वृद्धि गरिरहेकै छ । यसपल्ट पाएको मतले पनि भोलि जीटीए तृणमूलको पकडमा हुन्न भन्न सकिन्न । लुलो मोर्चाले न जनतालाई सुरक्षा दिन सक्छ न जनताको आकांक्षा पूरा गर्न सक्छ । कलिलै उमेरमा बुढो भइसकेको मोर्चालाई आफ्नै सुरक्षा गर्न हम्मे परिरहेको छ ।
विधानसभा चुनाउ जितेर मोर्चाले जुन उत्सव मनाइरहेको छ, त्यो अन्तिम उत्सव पनि हुनसक्छ । किनभने मोर्चामाथि सधैँ तरवार झुण्डिरहेकै छ । मोर्चाले गरेका जम्मै भूलहरूको दण्ड भोग्ने समय शुरु भइसकेको छ । मोर्चाका जम्मै झुट सार्वजनिक भइसकेको छ । पाँचौं अनुसूचीलाई हतियार बनाउने आन्तरिक काम मोर्चाले शुरु गरे पनि त्यसले जनताको भोक भेट्ने सम्भावना छैन ।
विधानसभा चुनाउसम्म मोर्चाले ‘गोर्खाल्याण्ड’-को सक्दो दुरुपयोग गरेकै हो । तर अझ पनि मोर्चालाई विश्वास गर्ने ‘मत’ पहाडमा छ । डा. हर्क ममतामुखी हुनु भावनात्मक राजनीतिक मैदानमा विमलले खेल्न पाएको स्पेस हो । हर्कलाई मुद्दा र जाति विरोधी बनाएर विमलले खेलेको गोटी काम त लाग्यो, तर उप्रान्त ममता सनक छेक्ने गोटी तिनीसित छैन ।
ममता वर्चस्व रहेको विधानसभामा मोर्चा विधायकहरूले पहाडबाट नै मुख सिलाएर जानुपर्ने बाध्यता छँदैछ । सिलाएको मुखले ती विधायकहरूले जनताको निम्ति के माग्ने हुन् ?
विधायकहरूले फेरि पनि विधानसभामा गोर्खाल्याण्डको आवाज उठाउने होइनन् । उठाए पनि त्यो प्रभावकारी हुने छैनन् । फेरि पनि विधायकहरूबाट पहाडको निम्ति हुनुपर्ने विकासका प्याकेजहरू निर्माण हुने होइन । फेरि पनि विधायकहरू विमलका गोटी नै हुन् । दलीय इमान्दारिता एउटा कुरा हो, जनमुद्दाप्रतिको प्रतिबद्धता र जनताको निम्ति चाहिने इमान्दारिता अर्को कुरा हो । यो दुई प्रतिबद्धतामा मोर्चा विधायकहरूले कुन छान्ने ?
छुट्टै राज्यको मुद्दा बोकेको मोर्चासित छुट्टै राज्य बनाउने मोडल नै छैन । भाजपाको आशामा बसेको यो दलका नेताहरूमा भाजपालाई केलाएर हेर्ने औकात छैन । मौखिक आस्वासन अनि मिडियाको दुरुपयोगको भरमा ‘हिन्दू राष्ट्रियता’-को ‘हिडन’ मन्त्र बोकेको भाजपाले देशभरिका अल्पसंख्यकहरूप्रति देखाएको आचरणले के भन्छ भने, मोर्चा, भाजपाको कठपुतली हो । मोर्चासित प्रतिबद्ध कुनै योजना र नीति छैन । जस्तोः अल्पसंख्यक गोर्खाहरूलाई छुट्टै राज्य दिएर उनीहरूको पहिचानलाई राजनीतिकरूपले सुनिश्चित गर्ने भाजपासित कुनै योजना छैन । जसवन्त र अहलुवालियाहरूले केन्द्रलाई भनिसकेका छन्, दार्जीलिङमा ‘विकास प्याकेज’-को गोटी फ्याँक्यो भने गोर्खा फुरफुर सेलाउँछ । जबसम्म मोर्चाले गोर्खास्वरलाई राष्ट्रियकरण गर्दैन तबसम्म विमल गुरूङ कूटनीतिक पपेटबाहेक अर्थोक साबित हुनेवाला छैनन् । भाजपाको राजनीतिक उपनिवेश बनेको कारण मोर्चाले खेल्ने मैदान केवल तीनवटा महकुमा बनेको छ । यसबाट बाहिर निस्किने ‘क्यारेक्टर’-टाढा टाढसमेत देखिँदैन । यसअर्थमा विमल विजय गोर्खाहरूको निम्ति गतिलो विडम्बना हो ।
यो विजयपछि के मोर्चाले पुरानो आनिबानी त्याग्ने शैली स्थापना गर्छ ? के मोर्चाले केही झुण्डलाई धनी बनाउने, ठेकेदारहरूलाई पोस्याउने र भ्रष्टाचारको मार्ग बन्द गर्ने चरित्र त्याग्न सक्छ ? के मोर्चाले मुद्दालाई राष्ट्रियकरण गर्ने अनि बहसको सतहमा ल्याउने स्पेस तयार गर्न सक्छ ? के मोर्चाले भाइभतिजावाद त्याग्न सक्छ ? के मोर्चाले जिटिएमा गरिरहेको चुक संसोधन गर्नसक्छ ? मोर्चा र विमल गुरूङ अघि लाखौं प्रश्नहरू झुण्डिएका छन्, के विमल गुरूङले एकेक प्रश्नहरूलाई सम्बोधन गर्न सक्छन् ?
एउटा चिनियाँ उखान छ, बाघको मुखबाट फुत्किएर ब्वाँसोको मुखमा । जनता ब्वाँसोको मुखमा जानबाट त बँच्यो तर बाघको मुखबाट फुत्किएर जनता फेरि पनि बाघकै मुखमा पुगे । के यो कुरा विमल गुरूङ एण्ड कम्पनीलाई थाहा छ ?
हर्क-हारबाट जनता फेरि पनि राज्यको कूटनीतिक सिकार हुनुबाट त बाँच्यो तर विमल विजयबाट फेरि केन्द्रको जालमा पऱ्यो । यतिखेर दार्जीलिङलाई ‘यदायदा ही धर्मस्य…’ हावासिङको मन्त्र बनेको छ । पहाड अघि पनि निरास थियो अहिले पनि निरास छ । मुद्दा जहाँ थियो, त्यहीँ छ, नेता र दलहरू जहाँ थिए त्यहीँ छैनन । उनीहरू धनी धनी धनी बनिरहेका छन्, जनता गरिब गरिब गरिब बनिरहेकै छन् ।
पहाड फेरि ‘जैसेथे’ छ ।
23,254 total views, 1 views today
Darjeeling court slaps7yrs rigorous imprisonment for alleged kidnapping Who is responsible?
19,219 total views, 4,379 views today
35,430 total views, 4,378 views today
SpiceJet to launch operations from Sikkim from October 4. SpiceJet’s ninth UDAN destination. They will be operating daily direct flights on Pakyong-Kolkata and Pakyong-Guwahati route 35,442 total views, 4,393 views today Comments comments
35,442 total views, 4,393 views today
35,424 total views, 4,403 views today
35,432 total views, 4,384 views today